Iran crash crash
Iran crash crash 2 taona 5 volana lasa izay #991
Misaotra anareo nandray: 52
Ny Iran Aseman Airlines flight 3704 avy ao Teheran ka hatrany Yasuj, Iran, dia nianjera tany amin'ny Tendrombohitra Dena, atsimon'i Isfahan, araka ny fanambaran'ny serivisy ho an'ny Iraniana Press TV.
Tao anatin'ilay fiaramanidina dia mpandeha 60, mpiloka roa mpanafika, mpikambana roa tao amin'ny trano fiambenana ary mpiandraikitra mpitandro filaminana roa.
Ny Tendrombohitra Dena dia tendrombohitra 80 km izay avo indrindra amin'ny 4,409 m (14,465 ft). Eo avaratr'i Yasuj no misy azy io. Ny toetr'andro amin'ny toeram-pitrandrahana dia ahitana ny oram-panala sy ny rivotra mahery, ny fanagadrana ny asa fanadiovana sy ny famonjena.
Fotoana mamorona pejy: 0.271 segondra